10 ruux oo Shabaab lala xiriirinaayo oo lagu qabtay Shabellaha hoose – STAR FM SOMALIA
Saraakiisha ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen 10 ruux oo lala xiriirinaayo inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada Ururka Al Shabaab ee Koonfurta iyo Bartamaha Somaliya ka dagaalama.
Howlgal laga sameeyay deegano hoostagga Deegaanka Lambar 50 ee Gobolka Shabellaha hoose, ayaa waxaa lagu soo qabtay dad gaaraya 10 ruux oo ciidamada ay uga shakiyee inay Shabaab xiriir la leeyihiin.
Howlgalka ayaa wuxuu ka dambeeyay, kadib markii habeen hore Shabaab weerar qorsheysan oo dad ay ku dileen ay ku soo qaadeen deegaanka lambar 50, waxayna ciidanka howlgalkaan sameeyeen shalay galab.
10-ka ruux ee ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen ayaa waxaa loo soo kaxeeyay Degmada Afgooye ee Gobolkaasi, halkaasi oo ciidamada ay baaritaan ku hayaan.
Saraakiisha hoggaamineysa howlgalkaan ayaa si kooban warbaahinta ugu sheegay in dadka lasoo qabtay baaritaan la marsiin doono islamarkaana cidda dambi lagu waayo lasii deyn doono.
Dadka la soo qabtay qaarkood ayaa xilliga ciidamada ay gacanta ku dhigaayeen waxa ay ku sugnaayeen beero ku yaalo duleedka Deegaanka Lambar 50.
Ciidamada Dowladda aagaasi ku sugan ayaa feejignaan ku jira, waxa ayna iska ilaalinayaan weeraro kale oo gaadmo ah oo Shabaabka ay ku soo qaadaan.
Wasaarada Caafimaadka oo Dibada Uqaadayso Dibada Dadka Dhaawacyada halista ah